အိတ်ဖွင့်တိုင်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » အိတ်ဖွင့်တိုင်စာ
- ဆိုး t
Posted by ဆိုး t on Jun 7, 2011 in Letter to The Editor | 24 comments
captainamerica ကိုတိုင်ချင်တာပါသူကြီး windtalker ရေးတဲ့
“နန်းတော် ဆိုတာ ဒီလို လုပ်ဖို့ နေရာလား ” ဆိုတဲ့ ပို့စ် မှာ သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့
ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ စဆဲတာကသူအရင်ဆဲတယ်ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရင်သိပါတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်က သူ့ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပဲပြောတာပါ သူကပြန်ပြောတော့
တရုတ်တွေအကုန်လုံးကို ပြောပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်း ဗမာတွေကို
ပြန်ပြောတာပါ ကျွန်တော့်ဘက်ကမမှားဘူးလို့တော့ မပြောပါဘူး
ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော်လုံးဝမကျေနပ်လို့ပါ
About ဆိုး t
ဆိုး t has written 8 post in this Website..
View all posts by ဆိုး t →
သဂျီးဆီ ဗလာချီတိုင်လို့ ရဘူးကွဲ့၊ သိတတ်မှပေါ့။
အတိုင်ခံရသူက ဗိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာမို့ သဂျီးလည်း လုပ်ရဲမယ် ထင်ပေါင်ကွယ်…
ဒီကိစ္စ ဒီမှာတင်ပဲပြီးရင်ကောင်းမှာပဲ..ကျွန်တော့ဘက်က မမှားဘူးလို့တော့ မပြောပါဘူး.. ဆိုရင် တောင်းပန်လေ ရွာတော်ရှင်ကို ဘာလို့ သူကြီးကိုတိုင်တာလဲဗျ..
ဗျို့ သဂျီး လိုအပ်တဲ့ အရေးယူမှူတွေ လုပ်ပေးလိုက်လေ … မဟုတ်လျှင် ရွာထဲက စီလုတ်တွေနဲ့ ဗမာတွေ ချကုန်လိမ့်မယ်
ဘာတွေဘယ်လိုဖစ်ကုန်လဲ…. သဂျီး ဘယ်နားမှာလဲ။ ခုံရုံးကို နှစ်ယောက်စလုံးပို့ပြီး မျှတအောင် လုပ်ပေးလိုက်လေ… ဘယ်သူမှားမှား ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို လွတ်လပ်မှုပေးလိုက်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
ကွေးသောလက်မဆန့်မီ..ဆန့်သောလက် မကွေးမီ တဲ့…အသက်တစ်ရာ မနေရကြပါဘူးဗျာ…….
ရွာသား အချင်းချင်း ကြေအေးပေး ကြစေလိုပါတယ်….
တစ်ခြား ကိစ္စလေးတွေမှာ အပြုသဘောနဲ့ ဒေါသထွက်ကြရအောင်ပါ….။
တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် ။ ဗမာဖြစ်ဖြစ်ပါ.. မြန်မာနိုင်ငံ ထဲမှာ (အခုရွာထဲမှာ ရှိကြတဲ့သူတွေ) အားလုံးလူတွေပါပဲဗျာ..
ဒီလိုပါပဲ စရင်းနောက်ရင်း စကားများကြတတ်ပါတယ်.. တစ်ရွာတည်းသားအချင်းချင်းဗျာ..သူကမကျေနပ် ကိုယ်ကမကြေနပ်နဲ.ပြီးမှာကို ဟုတ်တော့ဘူး
ကျွန်တော်ကပဲကြားထဲက တောင်းပန်ပေးပါတယ် အစ်ကိုတို.ရယ်..နော်
ရွာထဲမှာနေကြတဲ့ တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွာထဲမှာရှိကြတော့ ဒီရွာသားပဲပေါ့ ရွာထဲမှာ ရှုပ်ယှက်ခက်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ.နော်
ဆူးထွင်းအပ်လေး သုံးကြည့်ပါလား ….။
အရက်ပျံလေးသုတ်ပြိးမှသုံး ..။ ဒါမှမဟုတ် မီးလေးနဲ့တော့အပ်ကိုအပူပေးလိုက်အုံးပေါ့ ..။
ဒီမှာ ပို့စရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်မဲန် ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် EQ လေးတွေတော့ နည်းနည်း ရှိသင့် တယ်လို့ထင်ပါ တယ် ။ရေးတာတွေဟာ claim with facts လား baseless opinion ဆိုဒါ ခွဲခြားနိုင်ဖို့ကောင်းတယ် အထူးသဖြင့် serious subject မှာ ပေါ့လေ ။အကြောင်းအရာ တခုဟာ ဘယ်လူမျိုးမှာမဆိုဖြစ် တတ်တာပဲ ။ ရွာသူရွာသား တွေအားလုံးဟာလည်း သူငယ်တန်းကလေး သူငယ်နှပ်စား လည်း မဟုတ်ဖူး အမြင်ကျယ် တဲ့ သူ တွေ ပဲ လို့….
comment တွေဖတ်ကြည့်ရင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုဆိုတာ သိသာ ပါတယ် ။ ဒါလဲ IMHO….
တို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဒါတွေ မသင်သေးဘူ Zoe ရ .. ။
claim with facts
IMHO စာလုံးတွေ ကြည့်တာနဲ့ ဖျားလောက်ပါတယ် ရွာသားရယ် … ။
ဘယ် အရာမဆို ဘယ်သူမဆို သင်ရင် မတတ်ဖူး ဆိုတာ မရှိပါဘူး ။
EQ emtional quotient
Emotional Intelligence, or EI, describes an ability or capacity to perceive, assess, and manage the emotions of one’s self, and of others. Our EQ, or Emotional Quotient, is how one measures Emotional Intelligence.
IMHO ..In my humble opinion
claim with facts…အထောက်အထားအရ တင်ပြချင်း
baseless opinion…အခြေအမြစ်မရှိ တဲ့ ထင်မြင်ယူဆ ချက်
serious subject….လေးနက်တဲ့ အကြောင်းအရာ
အပေါ်က comment မှာ မြန်မာလိုမရေးမိတာ တောင်းပန်ပါတယ် ။ လောကြီးသွား တယ် ။
မဖျား ပါနဲ့နော် ။ ဆေးတိုက် မယ်လေ ။ :D
လူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထား လေးစားတဲ့ ဂေဇက်ရွာထဲမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်… လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လူသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်… လူတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးရှိသလို တခြားသူတိုင်းရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလည်း လေးစားတန်ဖိုးထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… အခုက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းရဲ့ အပိုဒ် (၂) လိင်၊ကျား၊မ၊ အသားအရောင်၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုစု၊ လူနည်းစု (ပိုထည့်ပေးလိုက်တာ) တွေကို မခွဲခြားရ ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို လုံးလုံးကြီး ဆန့်ကျင်နေပါတယ်… ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ နေရာမှာ အထူးသတိပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… ကဲ ရွာသကြီးအနေနဲ့ ဗီတိုအာဏာကို အသုံးမပြုပဲ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပြီး ရှင်းစေဗျာ…
ဒီမှာလဲ ဒီပြဿနာ ..ကျွန်တော့်မှာလဲ ကျွန်တော့်ပြဿနာပါ….
အို….သူကြီးရေ…သံတွဲမြို့ဆေးရုံကြီးလာဘ်စားတဲ့ ပို့စ် ကို ချက်ခြင်းကြီး ဘာလုပ်လိုက်ပါသလဲဗျာ…
တဦး ကို တဦး နားလည်မှူ့ ထားကြ ပါဗျာ။
ဟုတ်ပါခင်ဗျား….. user name ကြောင့်တော့မထင်ပါနဲ. တစ်ကယ်ကြီးကိုမဟုတ်ပါ….. :-)
ချိုကုတ်ဒူးကြီး အထင်ခံရမှ နေသာတယ်မို့လား ။
ဦးကြောင် အလုံးလေးက လကယ် လကယ်နဲ့ ဘိုလုပ်ဒါရဲကြောကျ
ဟုတ်ဖူးဂျ… ခတ်တော့တာပါပဲ.. တော်ပြီဂျာ ထပ်မပြောတော့ဝူး ပြောရတာမောလာဘီ